Hindiya: Dhismaha Ram Temple wuxuu bilaaban karaa horaanta sanadka dambe | Wararka Hindiya - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: Dhismaha Ram Temple wuxuu bilaaban karaa horaanta sanadka dambe | Wararka Hindiya
DELHI NEW: Waxay u badan tahay in dhismaha Ram Mandir uu bilaabmi doono sanadka soo socda Makar Sankranti umana muuqato inay ku lug leedahay 'shilanyas' cusub (xafladda caleemo saarka).
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dawladdu ay si dhakhso leh u hoggaansami doonto awaamiirta Maxkamadda Sare ee samaynta aaminaadda iyo la shaqaynta dhammaan saamileyda si loo dardargeliyo dhismaha wixii loo ballanqaaday inuu "heshiis weyn" noqon doono. Ram Mandir ”. "Sankranti waa waqti ku habboon in la bilaabo mashruuca waxaana rajeyneynaa in dowladdu ay dhameystirtay qaab dhismeedkaas wixii ka dambeeyay," ayuu yiri sarkaal sare.
Ilo wareedyo ayaa sidoo kale sheegay in ay rajeynayaan horumar wanaagsan 2022, marka UP ay u aado doorashooyinka. UP CM Yogi Adityanath wuxuu sameyn doonaa wax walba oo suurtagal ah mashruuca Mandir, kaas oo ka mid ah ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee Goraksh Peeth uu isagu hagayo.
Hay'adda VHP ayaa Axaddii sheegtay in Xaruntu ay tahay inay si dhakhso leh uga jawaabto go'aanka maxkamadda sare waxayna codsatay in qaab dhismeedka loo dhiso si waafaqsan mashruuca uu soo diyaariyey naqshadaha dhismaha ee Chandrakant Sompura dalabkiisa.
Madaxa VHP ee waqtigaas, Sompura, wuxuu mas'uul ka ahaa farshaxanimada dhismaha macbudka 1989, Ashok Singhal oo isagu ku wareejiyay kuwa daacadda u ah dalka, ayaa yidhi madaxweynaha ururka, Alok Kumar. Waxaan rajaynaynaa in macbudka cusub loo dhisi doono si ku habboon, ”ayuu raaciyay.
Sida laga soo xigtay xubno ka tirsan xafiiska VHP, dhagxaan-ka-jaridda iyo shaqo-u-dhisidda macbudka ayaa soo maray waddo dheer waana in loo adeegsadaa dhismaha. Kulan gaar ah oo ka tirsan xubnaha VHP Bureau halkan, waxaa la go'aamiyay in lagu casuumo dowladda inay si dhaqso leh wax uga qabato dhismaha macbudka.
Kumar wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dawladdu ku darto xubnaha Ram Janmabhoomi Nyas, oo ilaa hada ka shaqaynayay dhismaha macbudka, halka ay dhiseyso kalsoonida ay xukuntay maxkamada sare. "Markii la dhiso aaminaad, oo ay tahay in la sameeyo seddex bilood gudahood, dhismaha macbudku si dhakhso leh ayuu u bilaaban doonaa," ayuu yidhi sarkaal sare oo caan ku ah horumarka.
In kasta oo Adityanath ay safka hore kaga jiri doonto kormeeridda shaqada dhismaha ee wasiirnimada, wuxuu inta badan booqday Ayodhya ka dib markii uu xafiiska qabtay. Yogi wuxuu booqday magaalada quduuska ah ee 18 hal sano iyo badh. Booqashadiisii ​​ugu dambeysay waxay ahayd in lagu xuso "Deepotsava" munaasabada Diwali taas oo loogu dabaaldegay qaab aad u wanaagsan oo tan iyo markii uu xafiiska la wareegay.
Go'aanka ka soo baxay Golaha Amniga ayaa meesha ka saaray carqaladihii jiray wuxuuna jid u dhigay dhismaha macbud weyn, "ayuu yiri xukunka kadib.
CM wuxuu soo dhoweynayaa xukunka, isagoo ku dhawaaqaya in iskahorimaad hore oo sannadihii 492 in si nabad ah lagu xalliyey, si markaa loo xoojiyo dimoqraadiyadda laga bilaabo Hindiya .
Barta uu ku leeyahay boggiisa rasmiga ah, wuxuu ku qoraa: "Danaha siyaasadeed awgeeda, wax soo saarka qaar, iyagoo adeegsanaya shirqool, waxay Ayodhya u beddeleen arrin xasaasi ah. Si kastaba ha noqotee, Ayodhya waxay ahayd arrin aamin ah. Dhamaan dadka Hindida ah ee rumeysan awooda ugu sareysa, wax alla wixii diintooda ah, waxay tixgeliyaan Ram awowgoodii. "
2019-2020 Dib-u-gelida Garsoorka: Garsoorayaasha wali waxay cadaawad u leeyihiin Nouhoum Tapily